Fivondronam-ben’ny eveka : Ny fifidianana ihany no hamaha ny krizy -
AccueilSongandinaFivondronam-ben’ny eveka : Ny fifidianana ihany no hamaha ny krizy
Fivondronam-ben’ny eveka : Ny fifidianana ihany no hamaha ny krizy
31/05/2018 admintriatra Songandina 0
Niompana tamin’ny fanomanana ny olom-pirenena sy ny mpino kristiana amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny votoatin’ny fanambarana navoakan’ny fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara, taorian’ny fivoriana fanaon’izy ireo isan-taona. Notsindrian’izy ireo tao anatin’ny fanambarana fa ny fifidianana ihany no vahaolana hivoahana amin’izao krizy politika andalovan’ny firenena izao. Io ihany no lalana hampilamina ny firenena, satria izay no manaja ny lalàna velona. Nanentana ny olom-pirenena araka izany izy ireo tsy ho tafiditra ao anatin’ny vela-pandriky ny mpanao politika manoloana io fiatrehana ny fifidianana io. “Tokony tsy hanaiky hataon’ireo mpanao politika ho tohatra fiakarana intsony ny vahoaka malagasy” hoy ny fanambarana. Matetika tokoa mantsy no revon’ireo lainga tsara lahatra ataon’ireny mpanao politika ireny ny olom-pirenena, ka dia matetika no diso safidy rehefa tonga ny fifidianana. Anisan’ny antony lehibe nahatonga ny firenena latsaka tanaty fahantrana lalina izao. Nahatonga ny vahoaka malagasy niaina tao anatin’ny fahasahiranana nangitsokitsoka ihany koa. Nanao pi-maso tamin’ny vahoaka malagasy araka izany ireto Ray aman-dReny ara-panahy ireto mba tsy ho solafaka intsony, fa tena hijery kosa ny ho avin’ny firenena manomboka izao.
Namariparitra izay olona tokony hitondra ny firenena ihany koa ankoatra izay ireto fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara ireto tao anatin’ny fanambarana nataony. “Olo-marina vonona ny hiady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, sy hijery ny tsy fanjariana eo amin’ny lafiny ara-tsosialy vokatry ny fitantanana tsy nahomby hatramin’izay no tokony hapetraka eo amin’ny toeran’ny filoham-pirenena” raha ny fanambarana. Hatramin’izay tokoa mantsy dia nadio ivelany fotsiny ihany ireo mpitondra nifandimby, ka rehefa mbola ivelan’ny seza dia milokaloka fa hanasoa, sy hamaha ny olan’ny vahoaka malagasy amin’ny lafiny rehetra, niaraka tamin’ny teny mampanantenana sy kabary naharesy lahatra. Rehefa nomena azy ireny anefa ny fahefana, dia toa tsy izy no nanao ilay lokaloka. Tranga izay nahatonga ny filoham-pirenena ankehitriny nisedra olana tamin’ny fanarenana ity firenena ity. Ny mpanao politika hafa no nanimba ny firenena, ny filoha ankehitriny no nifaharan’ny rihitra. Dia ireny mpanao politika efa nanimba sy namotika ny firenena ireny indray ankehitriny no milaza ho mahita vahaolana amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, nefa hita mibaribary izao fa miezaka ny manao fanakorontanana. Noho ity farany no nahatonga ny fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara nanindry tao anatin’ny fanambarana nataony, fa “na tsy nahafa-po ny rehetra aza ilay didy navoakan’ny Hcc farany teo, dia tokony samy hanaraka izay kosa ireo mpanao politika rehetra”.
Nandany an’arivony miliara i Mamy Ravatomanga, nandritra ny fampielezan-kevitra fihodinana voalohany ho famerenana an’i Andry Rajoelina eo amin’ny fitondrana, hiaro azy manodidina ny raharaham-pitsarana atsy Frantsa. Kolikoly, fanadiovana vola maloto, fanodinkodinam-bolam-panjakana, sns. Araka ny taratasy ...Tohiny